Ekwentị - LaComparación
Ekwentị | 0 Comments
Ọtụtụ asịrị na-egosi na Google Pixel Fold nọ n'ụzọ; A na-atụ anya na ọ ga-abụ ekwentị mbụ enwere ike mpịachi site na nnukwu teknụzụ nwere Alphabet. Agbanyeghị, ka emechara ọgbakọ teknụzụ Google IO 2022 kwa afọ, anyị anaghị atụ anya na ọ ga-abịa n'oge adịghị anya.
Ọ bụ ezie na abụghị m onye na-akwado Apple, na ekwentị m gam akporo, smartwatch dakọtara, na Windows PC, otu m dị iche bụ iPad Pro ntụkwasị obi m, nke m ka na-eji ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchị. edezi, gụgharia ihe nkiri na...
TechRadar nwere ike na-akwado naanị na (*10*) OnePlus Nord 2T 5G bụ (*10*) ndị China emeputa na-esote etiti nso smartphone, na anyị na-enweta a ụwa mbụ anya na ngwaọrụ, ma ọ bụ naanị site n'azụ North ekwentị. ..
Google (*7*) 7 'a kpọsara', ọnwa tupu ebido atụmatụ ya
N'oge Google IO 2022, mgbe ọ kwusasịrị Google (*7*) 6a, ụlọ ọrụ ahụ tụrụ anyị n'anya site n'ikwu banyere usoro Google (*7*) 7 n'ụzọ dị ịtụnanya. Anyị tụrụ anya na ekwentị a (na nwanne Pro) ga-amalite. na October, na anyị nwere ike ịhụ a ...
Sony Xperia 1 IV ewepụtara blọọgụ dị ndụ: Hụ mpụta mbụ nke ekwentị igwefoto ọhụrụ
(*1*) Mmelite 2022-05-11T05:17:02.118Z Yabụ kedu ihe anyị na-atụ anya na mwepụta nke Sony Xperia 1 IV? Ọfọn, isi ihe anyị na-atụ anya ya bụ ... Xperia 1 IV. Nke a bụ ekwentị kachasị elu nke ụlọ ọrụ ahụ nke ga-eri ihe karịrị € 1000/ € 1000 / nhata ...
Ọ nweghị ihe meririla nnukwu nsogbu Xiaomi na Oppo gbagoro
Mmalite mkpanaka nke Carl Pei Ọ nweghị ihe nwetagoro nnukwu mmeri n'ọchịchọ ya ịbụ akara ama ama ama na-esote. Na nkwupụta mgbasa ozi, ụlọ ọrụ ahụ kwadoro na ekwentị na-esote, Ọ dịghị ihe ekwentị (1), ga-...